दैनिक उपासना – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – परमेश्वोरले तपाइँलाई प्रदान गर्नुभएको वरदानसँग तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउदै हुनुहुन्छ वा तपाईं डरमा रही पाएको वरदानलाई लुकाउँदै हुनुहुन्छ? जब हामी येशूसामु खडा हुन्छौं तब हामी सबैले आ-आफ्नो जीवनको लेखा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो समय यदि हामि ‘स्‍याबास असल नोकर, भन्ने शब्द परमेश्वोरको मुखबाट सुन्न चाहन्छौं भने आफ्नो […]
Posted on August 19, 2020 August 19, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – के तपाइँ कहिल्यै खेल खेल्नको लागि अन्तिम विकल्पमा छानिनु भएको छ? के तपाईं साथीहरूले गरिरहेको गतिविधिबाट एक्लिनु भएको छ ? हामी सबैलाई छनौट हुदा र नगरिदाको पिडा थाहा छ। यो एक प्रकारको घाउ हो जुन निको हुन केहि समय लाग्छ । येशू ख्रीष्टको सन्दर्भमा त्यस्तो होइन। संसारको जग बसाउनु भन्दा पहिले परमेश्वरले […]
Posted on August 5, 2020 August 5, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – आज विश्वभरका बच्चाहरूले आफ्ना नायकहरू जस्तो हुने सपना देख्छन्। त्यो कुनै पनि क्षेत्रको र जो कोहि पनि हुनसक्छ । उनीहरूले आफुलाई मन पर्ने व्याक्तित्वको छवि भएको लुगादेखी लिएर हरेक चिज खरीद गर्छन्, र उनको व्याक्तित्व हेर्छन्, साथीहरूसँग छलफल गर्छन् र त्यसमा रमाउछन् अनि तिनीहरूले गरेको हर चालको नक्कल गर्न प्रयास गर्छन्। येशू […]
Posted on July 25, 2020 July 25, 2020 Author Shalom Nepal	Comment(0)
शालोम नेपाल – एकै छिन सानो छदाको भनाइलाई याद गर्नुहोस् त!, “लट्ठी र ढुङ्गाले मेरो हड्डीहरू भाँच्न सक्छ, तर शब्दले मलाई कहिले असर गर्दैन?” त्यो एक झूट थियो जुनबाटो भएर हामीले आफुलाई हुर्काउन चाहन्थ्यौं। खराब शब्दले लट्ठी र ढुङ्गाले भन्दा बढी चोट पुर्‍याउँछ भने केहि स्थायी नोक्सान समेत पुर्‍याउँछ। प्रेरित पावल हामीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका मुखबाट […]